Ciidamada Danab oo shaaciyay magacyada rag ajaaniib ah oo lagu diley Shabelaha Hoose - Home somali news leader
Home NEWS Ciidamada Danab oo shaaciyay magacyada rag ajaaniib ah oo lagu diley Shabelaha...
Ciidamada Danab oo shaaciyay magacyada rag ajaaniib ah oo lagu diley Shabelaha Hoose
Ciidanka Sida gaarka ah u tababaran ee Kumaandooska Xoogga Dalka ee Danab ayaa shaaciyay magacyada rag ka tirsanaa ururka Alshabaab oo ay sheegeen inay ku dileen howlgal ka dhacay deegaan ka tirsan Gobolka Shabeelaha hoose.
Sida lagu daabacay warbaahinta dowlada federalka ilaa 17-Maleeshiyaad iyo Horjoogayaal isugu jira Soomaali iyo Ajaanib ayaa lagu diley howlgalkan.
“Howlgal qorsheysan oo ay Ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Kumaandooska Xoogga Dalka Danab ka sameeyeen Degmada Sablaale ee Gobolka Shabeelaha Hoose ayay ku bur buriyeen xaruntii guud ee Jabhadaha maleeshiyada Al-Shabaab.”ayaa lagu daabacay wakaalada wararka SONNA.
Xaruntaan ayaa ahayd goob Saldhig u ah maleyshiyaadka Jabhadaha ah ee ka tirsan argagixisada Al-Shabaab.
Ciidanka Kumaandooska Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa xalay saqdii dhaxe u daatay xaruntaan oo xiligaas ay ku sugnayeen Maleyshiyaad iyo Horjogayaal ka tirsanaa argagixisada.
Ciidanka ayaa halkaasi ku dilay 17-maleeshiyaad iyo horjoogayaal isugu jira kuwaasi oo ay ku jiraan ajaaniib.
Saraakiil ka tirsan Kumaandooska Danab oo la hadlay Idaacada Ciidamada Qalabka Sida ayaa sheegay in saldhigaan ay Ciidanka Danab weerarka ku qaadeen uu ahaa xarunta Guud ee waxa ay ugu yeeraan maleyshiyaadka Jabhadaha kooxdaasi.
Sidoo kale Saraakiisha Danab ayaa sheegay in Dagaalka kooban ee ka dhacay gudaha Saldhiga lagu dilay Maleyshiyaad iyo horjogayaal isugu jira Soomaali iyo Ajaanib.
Saraakiisha Danab ayaa soo bandhigay magacyada horjogayaasha lagu dilay Howlgalka, waxayna kala yihiin Horjooge Suleymaan Abuu Maxfuud oo ahaa ku-xigeenka horjoogaha Jabhadaha ama maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab una dhashay Dalka Tanzania, Abuu Yaasir Yaxiid oo heesta dhalashada Suuriya oo kooxdaasi u Qaabilsanaa Amniga Xerada Jabhadaha Al-shabaab iyo Horjooge Xasan Maxamed Cismaan oo u qaabilsanaa Howlgalinta Maleeshiyaadka jabhada.
Ciidanka Kumaandooska Danab ayaa gabin ahaan bur buriyay xarunta Al-Shabaab ku lahayeen Degmada Sablaale ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Previous articlePro-Trump protests staged across the United States, rival groups collide in Washington
Next articleRa’iisul Wasaaraha oo kulan la yeeshay Isimada iyo Bulshada Rayidka Puntland